Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 1t l1313 lar
Alarobia 27 Mar.
Eo amin'izao tontolo fantatsika izao dia fomba fiainan'ny biby ny mifampihinana. Ny teny hoe "tsingerin'ny sakafo" dia fampahatsiahivana mahazatra antsika ny amin'ny maha-zava-dehibe ny fihinanan'ny biby sasany ny biby hafa eo amin'ny tontolo iainantsika, ary sarotra ho antsika ny haminavina tontolo tsy misy izany. Kanefa tany am-boalohany dia nihinana zava-maniry ny zava-manana aina rehetra teto ambonin'ny tany (Gen. 1:30). Tsy nisy biby nifampihinana. Tsy
voambaran'ny Gen. 1:30 ny amin'ny sakafon'ireo biby anaty rano, kanefa azo antoka fa toy izany koa ny amin'izy ireo, koa rehefa nijery ny zavatra rehetra noforoniny Andriamanitra dia nambarany fa "tsara indrindra" izany.
Vakio ny Gen. 6:11-13 sy ny Gen. 9:2-4. Inona no fiovana niseho teo amin'ny zavaboary tamin'ny vanim-potoanan'ny safo-drano? Inona no fitotonganana niseho teo amin'ny fifandraisan'ny olona sy ny biby taorian'ny safo-drano?
Ilay fanjakana feno fiadanana tany am-boalohany dia nanjary feno fahasimbana, herisetra sy faharatsiana. Izany no vokatry ny fahotana. Ilay tontolo izay "tsara indrindra" taloha dia tonga ratsy dia ratsy ka izy ihany no niantso ny fandravana ny tenany.
Taorian'ny safo-drano dia nanjary natahotra ny olombelona ny biby. Voafaoka ao anatin'izany ny biby ety ambonin'ny tany sy ny biby manidina ary ny biby mivelona anaty rano. Mazava loatra fa mifanohitra amin'ny toe-javatra nisy tany aloha izany. Hita fa nanomboka tamin'io fotoana io dia nihena ny fanapahana izay nananan'ny olona teo amin'ny biby.
Vakio ny Isa. 65:25; 11:6-9. Manao ahoana ny fahasamihafana misy eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny zavaboary eo amin'izao tontolo ankehitriny izao sy ny ao amin'ilay tontolo ampanantenain'Andriamanitra amin'ny hoavy?
Amin'ny alalan'ny hakanton'izany teny izany no anehoan'i Isaia amintsika fa tsy hisy herisetra ao amin'ilay tontolo vaovao. Ny fahasimbana sy ny herisetra, izay nanjaka teto amin'izao tontolo izao talohan'ny safo-drano ka niantso ny fandravana azy dia samy tsy ho hita ao amin'ilay tontolo vaovao. Io tontolo io dia hanjakan'ny firindrana sy ny fiaraha-miasa; fanjakana feno fiadanana. Efa zatra tokoa mahita herisetra sy ny biby mifampihinana ary ny fahafatesana isika ka sarotra ho antsika ny haminavina tontolo hafa.
Araka ny hitantsika, ny filazantsara dia miresaka betsaka momba ny famerenana amin'ny laoniny. Mazava loatra fa Andriamanitra irery ihany no afaka manatanteraka ny famerenana amin'ny laoniny farany, kanefa inona no safidy azontsika atao mba hisian'ny famerenana amin'ny laoniny sasantsasany izay ilaina ankehitriny?